‘यसरी बन्छ नेपाल एजुकेशन हव’ - जीवन लामा (भिडियो वार्ता)
काठमाडौँको होटल अन्नपुर्ण परिसरमा २ दिने ‘चौथो नेपाल हाइयर एजुकेशन फेयर’ सुरु भएको छ । र, यो फेयर २२ भदौसम्म चल्ने छ । यो फेयरको आवश्यकता के हो ? किन गरिन्छ यस किसिमको फेयर ? यसै सम्बन्धमा फेयर आयोजक जीवन लामासँगको छोटो कुराकानी । हेर्नुहोस् भिडियोमा –
‘यसरी बन्छ नेपाल एजुकेशन हव’ – जीवन लामा (भिडियो वार्ता)
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार १९:१६
Prevसुरु भयो, नेपालकै पहिलो कलंकीको अन्डरपास (भिडियोमा)
एशियाली खेलकूदको महाकुम्भ आज देखि शुरु हुँदैNext